Konakele kakhulu ezikoleni - Umbono
Cape Town - Sekuphinde kwahlaselwa omunye uthisha phambi kwabafundi, kanti-ke lokhu sekushiye othisha basesikoleni esise-Eastern Cape bethuka izanya.
Bathi sebehlezi bethukile ngenxa yokuthi izigebengu zibakhomba ngemimese zibasabise nangezibhamu ezingamathoyizi emagcekeni esikole.
Bathi sebeyasaba nokuya ezikoleni bayofundisa, nokuphazamisa abafundi.
Abafundi bethu baphawule kanje embuzweni wokuthi ngokubona kwabo zingaqiniswa kanjani ezokuphepha ezikoleni:
Noluthando Mbanjwa: Umphakathi kumele usebenze ngokuzikhandla kukhethwe ama-forum obhekana nezikole zawo ukuze zishaywe izigebengu, asibeseke ngakho konke othisha bathuthukisa ikusasa lezingane zethu.
Collin Sandile Kansas Khathi: Njengazo zonke izikhungo zikahulumeni, maziqashelwe izinkampani zonogada ukuqinisekisa ukuphepha ezikoleni! Kepha kube nohlelo lokulawula ukukhokhelwa kwazo, lokhu kwenziwe ezingeni likazwelonke ukugwema inkohlakalo.
Derrick Sirayi: Kunzima kule ndaba, ngenxa yokuthi la bantwana baphuma emakhaya abahlali emigwaqeni, noma bangaseshwa uma bengena sizobuye sikhale thina sithi kuhlukunyezwa izingane zethu.
Bongy Shabzo: Onogada bayasaba ukugqolozelwa amehlo anewunga ngoba izingane zihlala zihlomile lezi zingane zimangaze uNgqongqoshe wezeMfundo e-KZN uSenzo Mchunu ethola inqwaba yezikhali ezumisile zingazi ukuthi uyeza zazilahla phansi.